Wargeyska “Marca” oo u hiiliyay Messi, kaddib markii uu dhawaan dhulka la galay halyayga reer Brazil ee Pele – Gool FM
Wargeyska “Marca” oo u hiiliyay Messi, kaddib markii uu dhawaan dhulka la galay halyayga reer Brazil ee Pele
Dajiye December 7, 2018
(Spain) 07 Dis 2018. Wargeyska “Marca” ee ka mid ah kuwa sida aadka ah ugu dhow kooxda Real Madrid ayaa daabacay maqaal uu ku difaacayo Laacibka Barcelona ee Lionel Messi.
Hadaba difaacida wargeyska “Marca” ee Lionel Messi ayaa waxay imaanaysaa kadib markii uu dhawaan halyayga kubada cagta ee dalka Brazil Pele uu hoos u dhigay awooda ciyaareed ee xidiga reer Argantina.
Pele ayaa iska diiday in isaga iyo Maradona lala bar bar dhigo xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi isagoona tilmaamay inay aad uga fiican yihiin maadaama uu leeyahay hal farsamo oo kaliya.
“Sidee iskula bar bardhigi kartaan xariif kubbada si fiican u madaxeyn kara, isla markaana ku laadi kara Midig iyo Bidix iyo mid kale oo kubbada ku shuudi kara hal lug oo kaliya, wuxuu leeyahay hal farsamo oo kaliya kubbadana si fiican uma madaxeyn karo” ayuu yiri Pele.
Hadaba wargeyska “Marca” ayaa sheegay in Pele uu u arko in Messi uusan ahayn kan ugu fiican taariikhda kubada cagta, isla markaana uu jiro shaqsi isaga ka fiican isla markaana ay haboon tahay in la ixtiraamo.
Laakiin wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri in Pele uusan si joogta ah u fiirsan qaab ciyaareedka Lionel Messi, isla markaana ay haboon tahay inuu weydiiyo goolhayaha reer Holland ee Edwin van der Sar sida uu goolka kaga dhaliyay kulankii finalka Champions League ee 2009-kii.
Arinta kale ee ku aadan inuusan kubada ku laadi Karin waxaan ka ahayn lugta bidix, waa inuu dib u fiiriyaa rikoorka isla markaana uu xisaabiyaa tirada inta jeer uu Messi gool ku dhaliyay lugta midig.
Difaacida wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa warbixintiisan ku soo xiray:
“Waa wax layaab leh in shaqsi weyn ee sida Pele oo kale inuu qaabkan jaahilnimada ah uu kaga hadlo Lionel Messi,waa wax iska cad inuusan si wanaagsan u daawanin xirfadiisa ciyaareed, waana hadalo aan asluub lahayn”.
Kahor kulanka Chelsea iyo Man City, Marcos Alonso oo walaac ka muujiyay farqiga u dhexeeya labada kooxood
PSG oo qarka u saaran in ay dhulka ku jiido kooxaha Manchester City, Barcelona iyo Bayern Munich